रुपन्देही गोली काण्ड : गृह मन्त्रालयले दियो यस्तो कडा चेतावनी, अब के होला ? -
रुपन्देही गोली काण्ड : गृह मन्त्रालयले दियो यस्तो कडा चेतावनी, अब के होला ?
रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सु’कुम’बासीको नाममा भूमा’फियाले क’ब्जा गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारले सुरक्षा निकायलाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा भएको सुरक्षा बैठकले मोतीपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सुकुमबासीको नाममा भूमा’फियाले क’ब्जाको प्रयास गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षाकर्मीलाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले वास्तविक सुकुमबासीभन्दा पनि विभिन्न जिल्लाबाट आएका अ’तिक्र’मणकारीले सो क्षेत्रमा टहरा बनाएर सरकारी जग्गा कब्जाको प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दिलकुमार तामाङले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अति’क्र’मण गर्नेलाई का’रबा’ही गर्ने चे’ताव’नी दिएका छन् । गृहले जग्गा अ’तिक्रम’ण गर्न नदिन रूपन्देही जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
‘पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कैलालीसम्मका व्यक्तिलाई सरकारले जग्गा दिन्छ भन्ने भ्र’म फैलाएर ल्याएको देखियो। वास्तविक जग्गा नभएकाभन्दा पनि सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर जग्गा क’ब्जा गर्न समूह सक्रिय रहेको देखियो,’
सुरक्षा बैठकपछि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सुकु’मबासीको नाममा बाहिरका मानिससमेत आएकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिइएको हो।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बुटवलको रुपन्देही मोतीपुरका वास्तविक सुकु’म्वासीको सम’स्या हल गर्नका लागि तत्काल पहल थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।
सोमबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमा केसीले सुकु’म्वासी सम’स्या समाधान सुझाव कार्यदल निर्माण गर्नका लागि रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिएका हुन् ।
बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समस्या समाधान सुझाव कार्यकालमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको प्रतिनिधि, नापी कार्यालय रुपन्देही प्रतिनिधि, औद्योगिक ग्राम रुपन्देहीको प्रतिनिधि, भूमिहीनको प्रतिनिधि लगायतको टोलीले सम्मिलित एक कार्यदल गठनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले मृतकका परिवारलाई जनही १ लाख राहतस्वरुप प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारकाबाट मोतीपुर घटनाका मृ’त’कहरुमा समवेदना व्यक्त गर्ने, घा’इ’तेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मृ’त’कका
परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख राहत प्रदान गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मालाई जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् । यस्तै दुवै पक्षबाट भएका घा’इ’तेहरूको उपचारको जिम्मेवारी राज्यले लिने पनि जनाइएको छ ।
मन्त्रि बनेको केहि दिनमै गरे प्रेम आलेले यस्तो काम, प्रधानमन्त्रि देउवा मख्खै
डा. बाबुराम भट्टराईको भविष्यवाणी- ‘एमसीसी पास गरिँदैन भने नेपाल अफ’गानि’स्तान बन्छ’